Imisebenzi Uhlu | Izixazululo ze-OMG
Sawubona! Leli khasi lisetshenziswa yi-plugin yakho yeMenenja Yomsebenzi njengesisekelo. Zizwe ukhululekile ukushintsha izilungiselelo lapha, kepha ngicela ungasuli leli khasi. Futhi qaphela ukuthi noma yikuphi okuqukethwe okufaka lapha ngeke kuboniswe lapho leli khasi liboniswa kusayithi lakho.
Uhlu Lokusebenza igcine ukuguqulwa: Okthoba 9th, i-2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-3007 Ukubuka kwe-4 Namuhla